रियलको खराब प्रदर्शन ! - सबै खेल
रियलको खराब प्रदर्शन !
१५ श्रावण २०७६, बुधबार १६:२३ July 31, 20190Comments real madrid, Zidane
प्रिसिजन टुरमा रहेको स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडले खराब प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ । इडेन हाजार्ड, लुका जोभिक, फेर्लान्ड मेन्डी, रोड्रिगो गोएसलगायतका नयाँ स्टार खेलाडीका साथ प्रिसिजन टुरमा निस्किएको रियलले ४ मध्ये १ खेलमा मात्र जित निकाल्न सकेको छ ।
अघिल्लो सिजन सुरु हुनु ठीक अगाडि स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो र प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले रियल छाडेपछि रियलको खराब प्रदर्शनको यात्रा सुरु भएको थियो । सिजनको बीचमै जिदान पुनः प्रशिक्षकमा रुपमा फर्किए पनि रियलाई उनले सही ट्रयाकमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
रोनाल्डो र जिदानको बहिगर्मनपछि रियलले जुलेन लोपेटगुइ र सान्टियागो सोलारीलाई प्रशिक्षकका रुपमा नियक्त ग¥यो । तर, दुवैको प्रशिक्षणमा पनि रियलले खराब प्रदर्शन गरेपछि रियलले पुनः जिदानलाई प्रशिक्षकका रुपमा सिजन नसकिँदै नियुक्त गरेको थियो ।
जिदानले समर ट्रान्सफर विन्डोमा थुप्रै पैसा खर्च गर्दै स्टार खेलाडीलाई क्लबमा भित्र्याएको छ । तर, त्यसपछि रियलको प्रर्दशनमा सुधार नआएपछि जिदानकै पद धरापमा पर्न सक्ने देखिएको छ । रियलले नयाँ सिजनका लागि बेल्जियन स्टार हाजार्ड, सर्बियन स्टार लुका जोभिक, ब्राजिलियन खेलाडीद्वय इडर मिलिटाओ, रोड्रिगो, फ्रेन्च डिफेन्डर फेर्लान्ड मेन्डी र जापानका युवा खेलाडी टाकेफुसा कुवोलाई किनेको थियो ।
स्टार खेलाडीको साथ पाउँदा पनि रियलले प्रदर्शनमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । अघिल्लो साता भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा एट्लेटिको म्याड्रिडसँग ७–३ को लज्जास्पद हार बेहोरेपछि रियलका लागि आगामी सिजन निकै कठीन र दबाबपूर्ण हुने देखिएको छ ।
प्रिसिजनको पहिलो खेलमा रियल जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसँग ३–१ ले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा इंग्लिस क्लबमा अर्सनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३–२ ले पराजित गरेको थियो । यस्तै, मंगलबार राति भएको खेलमा रियल टोटनह्यामसँग १–०ले पराजित भयो ।
रियलका खेलाडीमा अहिले मनोबल कमजोर देखिएको छ । पहिला गोल खानेबित्तिकै आत्तिएको देखिन्छ । सुरुमै गोल खाएपछि रियलका खेलाडी स्वभाविक खेल खेल्न असमर्थ भइरहेका छन् । प्रिसिजनका ४ खेलमा खाएको १३ गोलमध्ये ९ गोल रियलले पहिलो हाफमै खाएको छ । त्यसपछि उनीहरुले दोस्र्रो हाफमा ‘कमब्याक’ गर्न सकेका छैनन् ।
रोनाल्डोको बहिर्गमनसँगै रियलले थुप्रो युवा खेलाडीलाई भित्र्यो । तर, तिनीहरुले पर्याप्त अवसर नै पाएका छैनन् । अघिल्लो सिजन रियलले भिनिसियस जुनियर, अल्भारो ओड्रिजोला, ब्राहिम डियाज, सर्जियो रेगुइलोन, फेडेरिको भालभार्डे खेलाएको थियो । उनीहरु खेलमा राम्रै प्रभाव छाडेका थिए । ती मध्येपछि भिनियिसले निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
तर, जिदान पुनः रियलमा आएसँगै भिनिसियसले पर्याप्त मौका नै पाएका छैनन् । यस्तै ओड्रिजोल, रेगुइलोन र भालभार्डेको अवस्थामा पनि उस्तै छ ।
यो सिजनमा पनि रियलले थप २ युवा स्टार खेलाडीलाई ल्याएको छ । ब्राजिलियन रोड्रिगो र जापानक कुवो । दुवैले प्रिसिजनको पहिलो खेलमा बायर्नविरुद्ध डेब्यू गर्दै प्रभाव छाडेका थिए । सो खेलमा रोड्रिगोले त फ्रिकिकमा उत्कृष्ट गोल समेत गरेका थिए ।
तर, त्यसपछिका खेलमा दुवैले धेरै मौका नै पाएका छैनन् । यद्यपि, टोटनह्याम विरुद्ध भने जिदानले रोड्रिगोलाई सुरुवातबाटै खेलाएका थिए ।
रियललाई पुनः लय फर्काउन प्रशिक्षक जिदानले युवा खेलाडीलाई पर्याप्त मौका दिँदै टिमलाई जोसिलो बनाउन आवश्यक छ । साथै प्रशिक्षक जिदानले नयाँ खेलाडीका साथ नयाँ रणनीति अपनाउनु पनि अवाश्यक देखिएको छ ।
← कोहली भन्छन्, रोहितसँग कुनै समस्या छैन, हल्ला बकवास हुन्
मेसी र रोनाल्डोलाई पछि पार्दै एम्बाप्पे बने ‘भ्यालुएबल प्लेयर’ →
सर्फराज वर्खास्त, बाबर र अजहरलाई कप्तानको जिम्मा
१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार २३:५२ 0
भारतलाई हराउँदै माल्दिभ्सले जित्यो साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि
३० भाद्र २०७५, शनिबार २०:२० 0
सन्दीपको बबाल बलिङ, लिए एकै ओभरमा २ विकेट
१८ माघ २०७५, शुक्रबार १५:२४ 0